Ahoana ny fanavaozana ny Ubuntu 18.10 avy amin'ny Ubuntu 18.04 LTS? | Ubunlog
Ahoana ny fanavaozana ny Ubuntu 18.10 avy amin'ny Ubuntu 18.04 LTS?
Tsara toy ny voatonona tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia azo alaina izao mba hisintomana ny kinova Ubuntu 18.10 vaovao, na dia ho an'ireo izay mampiasa Ubuntu 18.04 LTS aza dia azon'izy ireo atao ny mitsambikina amin'ny kinova manaraka nefa tsy mila mametraka indray.
Miaraka amin'izany Safidy ho an'ireo mpampiasa Ubuntu 18.04 LTS hanao ny fitsambikinana manaraka azonao ny safidy hiarovana ny fikirakiran'ny mpampiasa rehetra, ary koa ireo rakitra manan-danja hita ao anatin'ny rafitra.
Toy izany koa alohan'ny hanombohana ity dingana ity dia tsy maintsy mampitandrina aho ny fanovana ny fanovana avy amin'ny kinova LTS ho an'ny kinova mahazatra dia mametra anao hanana fanohanana mandritra ny 9 volana alohan'ny hijanonany amin'ny fanohanana.
Etsy ankilany, izay no kely indrindra atolotra anao satria ny kinova xx.10 dia fototra fotsiny hanatsarana sy handefasana ireo kinova xx.04 izay misy fitoniana sy fanohanana lehibe kokoa-
Ary farany, na dia heverina ho dingana azo antoka aza izany dia tsy misy na inona na inona milaza aminao fa misy zavatra mitranga mandritra izany, ka raha toa ka very ny data na ny totalin'ny rafitra dia anjaranao izany.
Izany no antony alohan'ny hanaovanao izany dia atoro anao foana sy amin'ny fotoana rehetra anaovanao backup amin'ny fampahalalana lehibe anao.
Fantatrao izany, Araho ny torolàlana etsy ambany hanatsarana ny Ubuntu 18.10 avy amin'ny Ubuntu 18.04 LTS.
1 Hatsarao ny dingana manomboka amin'ny Ubuntu 18.04 LTS mankany Ubuntu 18.10
1.1 Nametraka ny kinova Ubuntu 18.10 vaovao
Hatsarao ny dingana manomboka amin'ny Ubuntu 18.04 LTS mankany Ubuntu 18.10
Alohan'ny hanombohana ny fizotry ny fanavaozana, Azafady mba tanteraho ireto fomba manaraka ireto hisorohana olana mandritra ny fizotrany.
Esory ny mpamily tompony ary ampiasao mpamily loharano misokatra
Atsaharo ny tahiry rehetra an'ny antoko fahatelo
Mba hialana amin'ny lesoka marobe ary na dia ny fampiatoana ny fametrahana aza, alefaso ny tahiry rehetra an'ny antoko fahatelo.
Azonao atao ny manamboatra backup amin'ireo miaraka amin'ny fitaovana sasany izay efa voalaza teto amin'ny bilaogy.
Tena ilaina ny manamboatra fanovana sasany amin'ny fitaovantsikaHo an'ity dia tsy maintsy mandeha any amin'ny "Rindrambaiko sy fanavaozana" izay hikarohantsika amin'ny lisitry ny lozisialy izahay.
Ary eo am-baravarankely izay nosokafana dia tsy maintsy mandeha any amin'ny vakizoro Updates isika, anisan'ireo safidy asehony antsika ao amin'ny "Ampahafantaro ahy ny kinova vaovao an'ny Ubuntu" eto isika dia hisafidy ny safidy omeny antsika ho "Izay vaovao rehetra kinova ".
Farany, tsy maintsy alamintsika ny rafitra hijerena sy hampitandremana raha misy kinova vaovao. Mba hahatratrarana izany dia ampy ny manokatra fantsona ary manoratra ireto baiko manaraka ireto isika amin'izany:
Vita ity hamerina hanangana ny rafitra isika, miaraka amin'izany dia hiantoka izahay fa manana ny fonosana farany indrindra ao amin'ny rafitra ary ialao ny olana mety hitranga.
Nametraka ny kinova Ubuntu 18.10 vaovao
Aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra, rehefa miditra ianao dia holazaina aminao fa misy kinova Ubuntu vaovao misy, sokafy ny terminal sy ny karazana:
ankehitriny mila tsindrio fotsiny ny bokotra «Eny, havaozy izao» ary avy eo dia angatahina isika hiditra ny teny miafina hanome alalana ny fanavaozana.
Raha tsy nampiseho ilay fampandrenesana fanavaozana izany. Azontsika atao ny manery an'ity dingana ity, noho izany dia hanokatra terminal misy Ctrl + Alt + T isika ary amin'izany dia hamoaka ity baiko manaraka ity izahay:
Ity baiko ity dia hanampy anao amin'ny ankapobeny dia ny manokatra ny fitaovana fanavaozana izay rehefa nosokafana dia voatery hanamarina raha misy kinova avo kokoa noho ilay ampiasainao.
Ity dingana ity dia mila misintona fonosana 1GB na mihoatra ary maharitra 2 ora na mihoatra ny configure. Noho izany dia tsy maintsy miandry ianao vao vita ny fizotrany.
Amin'ny faran'ity dingana ity, raha toa ka novonoina tsy tapaka ny zava-drehetra dia tokony ho fantatrao fa misy fonosana lasa lany andro amin'ny fanavaozana, noho izany dia hampahafantarina anao ianao ary afaka misafidy eo amin'ny "Keep" sy "Delete", ny safidy farany dia ny soso-kevitra indrindra
Farany, ny dingana farany tsy maintsy raisintsika dia ny famerenana indray ny rafitray, ka ny fiovana rehetra nampiharina dia nampidirina tamin'ny fiandohan'ny rafitra miaraka amin'ny Kernel vaovao izay ampidirin'ity kinova ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fanavaozana ny Ubuntu 18.10 avy amin'ny Ubuntu 18.04 LTS?
Julier dia hoy izy:
Ny olana dia tsy manaiky afa-tsy rafitra 32-bit ny PC-ko, noho izany dia afaka mijanona amin'ny Ubuntu 16.04 LTS fotsiny aho izao. Ny kinova 18 fantatro dia ho an'ny 64 bit. Manantena aho fa tsy hiala ireo kinova 32-bit.
Valiny tamin'i Julier
Javier González dia hoy izy:
Navoaka ho azy ny fanavaozana, ary rehefa manomboka azy aho dia mahazo windows milaza amiko hadisoana ... Tsy mahalala ny linux aho, ka tsy hitako izay hatao ...
-Mametaka ny varavarankely:
(1) Amboary ny lesoka avy amin'ny Ubuntu 18.04 mankany Ubuntu 18.10
Tsy afaka mametraka "libc-bin"
Misy varavarankely mampahafantatra ahy fa: Mitohy ny fanavaozana, fa ny fonosana "libc-bin" dia mety tsy anaty fanjakana miasa. Diniho ny handefa tatitra momba ny bibikely momba an'io.
napetraka libc-bin fonosana taorian'ny fametrahana installer script subprocess niverina status exit error 135
(2) Tsy afaka nametraka fanavaozana
Nofoanana ny fanavaozana. Ny rafitrao dia mety navela tao anaty fanjakana tsy afaka nampiasaina. Hisy fanarenana izao (dpkg – configurure -a).
Valiny tamin'i Javier Gonzalez
(3) Fanavaozana tsy feno
Ny fanatsarana dia nahavita ampahany saingy nisy lesoka nandritra ny fizotran'ny fanavaozana.
Salama, azoko ny fanavaozana, apetrako ny fanavaozana ary mikatona ny varavarankely ary tsy misy na inona na inona mitranga
Amin'izao fotoana izao dia mila miandry fotsiny isika satria vao navotsotra ny fanavaozana ary noho izany dia mety ho tototry ny mpizara.
Tsy haiko ny fomba, aorian'ny famerenako indray dia manavao indray aho ary efa manana Ubuntu 18.10 ...
Miarahaba ary misaotra…
Ny zavatra hitako fa tsy eo i Ubuntu dia ny fanesorana ny mangarahara sy ny aloky ny varavarankely tsy hoe satria tsy tiako izany fa noho izy manome fampisehoana bebe kokoa. Misy fomba ve?
Mamaly ny antony
Joshua Cavalheiro Schipper dia hoy izy:
Vao avy nametraka lubuntu 18.10 dia tiako be ilay interface vaovao
Valiny tamin'i Josué Cavalheiro Schipper
Mitadiava fonosana azo alaina avy amin'ny terminal ao amin'ny Ubuntu sy ny derivatives
Azo alaina izao ny kinova Ubuntu 18.10